Madaxweyne Farmaajo oo Kampala ka Khudbeeyey (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 23, 2017 3:04 g 0
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaan boqollaal dad ah kula hadlay caasimadda dalka Uganda ee Kampala wuxuuna shaaca ka qaaday in dadaal dheer ay ku bixinayaan sidii uu u soo celinlahaa dowladnimadii Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ay haatan tahay dhanka ammaanka oo ay kooxda Shabaab ay dadkii weeraro arxan darro ah ku hayso.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay iney ka qaybqaataan sugidda ammaanka.
Waa safarkii labaad ee uu madaxweyne Farmaajo uu ku tago dalka Uganda.
Jubaland oo Dhaqdhaqaaq Ciidan ka Waada Jubada Hoose (dhegayso)